watchOS 6.2 beta 5 inowanikwa kune vanogadzira | Ndinobva mac
watchOS 6.2 beta 5 inowanikwa kune vanogadzira
La watchOS 5 beta 6.2 yakangomhara kune vanogadzira. Izvi zvauya mushure mekutanga kwenyowani beta vhezheni dzeMacOS, iOS, tvOS uye iPadOS. Iye zvino neshanduro iyi nyowani, vagadziri vanogona kutotora iyi vhezheni.
Zvekare isu tine beta yeApple's wareable iri muruoko, iyo haipe yakawanda. Inotarisa pakukwanisa kugadzirisa hunhu hwapfuura uye nekuvandudza izvo zvikanganiso zvakawanikwa.
WatchOS 5 beta 6.2 haina kuunza chero chinhu chitsva
Iyo Apple Watch ikozvino ine itsva beta vhezheni 6.2 inowanikwa chete inowanika kune vanogadzira. Iyi vhezheni yakaburitswa nguva pfupi yapfuura mabheji emamwe mashandiro eApple zvishandiso uye vhiki gare gare kubva beta vhezheni 4 izvo hazvina kuunza nhau futi. Nguva dzese patinenge tichiswedera padyo neshanduro yekupedzisira uye kunyanya kune yeruzhinji beta inoitirwa munhu wese anoda kuziva nhau kuti Apple inozadzisa pane wachi.
Kana iwe uri mugadziri, iwe unotoziva kare kuti une mukana wekugadzirisa izvo zvinoshandiswa zvaunoda kuita kune nhau dzeiyi beta, iyo kunyangwe sezvatakataura, Pakutanga ivo vanotarisana nekugadziriswa kwe bug uye kugadzirisa kwakaunzwa zvishoma nezvishoma, beta mushure me beta. Nenzira yekukuyeuchidza iwe zvakare kuti idzi beta shanduro dzeApple smart wachi haibvumiri iwe "kudzikisira" saka zvakakosha kurega ivo chete vavaki kuti vadziedze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 6.2 beta 5 inowanikwa kune vanogadzira
Muvhiki ino, ese maApple Stores muItaly anovhara madhoo avo nekuda kwekonavirus
Logitech inotangisa nyowani 3-in-1 yekuchaja dock ye iPhone, Apple Watch uye AirPods